Shaqooyinka Mumbai ee HR - Dawlad - Bangiga iyo IT furitaanka Hindiya
Shaqooyinka Mumbai - Waxaan shaqaaleysiinaynaa India!
Shaqooyinka Dubai ee Ajaanibta
Shaqada Dubai Mall - Codso Xannaano Sare oo Ku Sugan Imaaraadka!
Published by Shirkadda Dubai City at July 30, 2018
Jobs Mumbai sidee looga helaa iyaga ?. Xaqiiqdii, Shirkaddeenu waxay leedahay shaqo-dooneyaal badan oo Hindiya ka yimid. Marka, annaga oo tan maskaxda ku hayna, waxaan go'aansannay inaan dhammaantood caawinno. Waqtigan xaadirka ah, kooxdeenu waxay dhigeen macluumaad faahfaahsan. Marka la soo koobo sida loo helo shaqo aagga Mumbai. Waxaan sidoo kale isbarbar dhigey Mumbai Dubai. Anigoo taas maskaxda ku hayna, waxaan rajeyneynaa inaan caawino shaqo doonka. Iyo inta shaqaaleeyayaasha isticmaalaya talooyinkayaga. Dhab ahaantii, ka hel shaqooyinka Deegaanka Mumbai. Ahmiyadeenna ugu weyn waxay noqon doontaa Shaqooyin ku yaal Mumbai. Iyo farqiga u dhexeeya nooca shaqooyinka banaan. Faahfaahintaada kuqoro sida ugu fiican Indian goobaha shaqada. oo raadi sida loo bilaabi lahaa xirfad ku taal Hindiya. Dhinaca kale, waxaan ku martiqaadeynaa dadka ka yimid Hindiya si ay ugu biiraan shirkadeena soo bandhigid cusub oo cusub.
Waxaa jira in badan oo ka mid ah howl wadeenada aqoonta leh. Iyadoo tanna maskaxda lagu hayo, kooxdeena waxay bilaabeysaa meelayno dhowr qodob iyo qodobo. Tusaale ahaan liiska dhammaystiran ee goobaha shaqada ee Mumbai. Sidoo kale talooyin ku saabsan shaqo doonka ka socda magaalada Mumbai. Waxaa intaa dheer, shaqooyinka ugu fiican ee suurta galka ah ayaa laga bixiyaa gudaha Hindiya. Ma hadda waxaa laga heli karaa magaalooyinka waaweyn sida Mumbai. Tani waa sababta ay kooxdeenu u dhigayaan qodobkaan rajeynayaan inay ku siiyaan aqoon kugu filan. Just si aad u muujiso suurtagalnimada inaad shaqeyso Mumbai. Dhinaca kale, waxaa jira fursado badan. Hoggaamiyayaal ku yaal Hindiya si ay nolol wanaagsan uga helaan Mumbai. Tani waa sababta aan isku dayeyno in aan wax ka barno hoosta.
Shirkaddayadu waxay shaqaaleysiisay Mumbai
Waxaan nahay hadda isagoo leh dhowr shirkadood oo ka socda India. Waxaana sugeynaa inaan u dhaqaaqno suuqa shaqada Hindiya. Kooxdayadu waxay raadineysaa inay ka hesho dib u soo celinta Mumbai. Iyo dadka saldhig ka ah aaggan. Hubaashii waa awoodaa shaqo ka raadso shirkadeena. Sababta oo ah ujeedada raadinta shaqo. Shaqaalaynteena shirkadda ayaa lagu qiimeeyay Hindiya. Sidaa darteed, shaqaale cusub oo hubaal ah ayaa hubaal ah adeegyadayada shaqaalaynta. Tan iyo markii aan bilowno mashaariic shaqo qoris ah oo laga helo Hindiya. Kooxdayada HR waxay bedeleen shirkadeena. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa hay'ad caalami ah oo caalami ah oo loogu magac daray Mumbai.
Tan iyo sannadkii hore 20 magaalada Mumbai. Noqo mid aad u meel caan ah oo loogu talagalay maamulayaasha maareynta. Sababo badan awgood Yurub iyo UAE Shirkaduhu waxay leeyihiin warshado soo kordha. Xaaladahaas oo kale, waxaan gelinaynaa ugaarsadeyaal xirfad raadis ah. Waxaan isku dayaynaa in la jebiyo maamulka HR galay caalamiga ganacsi shirkad. Waana hubaal caasimadda magaalada ganacsiga ee dunida Hindiya. Wuxuu noqonayaa mid caan ah. Intaa waxaa dheer, shirkadaha ugu horreeya. U hogaansamida caanno korodhsiimo leh ajaanib. Gaar ahaan aduunka oo idil.
Waqtiga xaadirka ah, Shirkadda Dubai City. Caawinta shaqa doonka ka yimid India. Anaguna sugitaanka CV-gaaga. Si fudud ayaa shaqo doonka cusub. Keeni kartaa CV boggayaga internetka. Iyo sugida shaqooyinka cusub ee Mumbai. Magaalada Mumbai waa Shaki la'aan shaki ayaa ugu sarreeya shaqada. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Hindida magaalada ugu caansan shaqooyinka. Magaaladan waxaa ku nool dad aad u tiro badan. Tani waa sababta Waxaanu ku meelaynaynaa shaqooyinka cusub ee shaqooyinka bannaan maalin kasta. Ma aha oo keliya in magaaladani ay wanaagsan tahay. Miyuu leeyahay hab nololeed firfircoon oo loogu talagalay dadka maxalliga ah. Waagii hore, shirkaddayada ayaa la geeyaa saddex iyo toban kun oo shaqaale doon ah oo jooga Mumbai.
Halkeen ka caawin karnaa si aad shaqo u hesho?
Dadka ugu badani waxay shaqo ka helayaan magaalooyinka waaweyn. Magaalada ugu raaxeysana waa Mumbai. Sababtoo ah Magaaladani waxay leedahay kala duwanaansho la'aanta. Intaa waxaa dheer, noloshu waa mid aad u fiican oo heer sare ah. Waxaa jira fursado aan dhammaad lahayn. Gaar ahaan ee shaqo doonka. Laga soo bilaabo a qayb ka mid ah Magaalada. Si shaqo looga helo Mumbai. Waxaad u baahan tahay inaad la hadasho dadka leh khibrad ganacsi oo kaladuwan. Iyada oo leh xaalad bulsheed sare iyo sidoo kale, dhaqaale iyo aqoon dhaqan. Tani waa xaqiiqdii waxay kaa caawineysaa inaad hesho macalimiin ku haboon HR.
Qaybta ugu badan, kooxdeena ka shaqeysa heer maamul oo heer ah. Xaaladaha qaarkood waxaan ka caawinaynaa safarka. Iyo wada-shaqeynta dadka shaqo doonka ah. Waxay ka dhigeysaa shirkadeena mid ka mid ah kuwa ugu caansan Hindida. Marka, waxaan halkaan u joognaa kaa caawiyo magaalooyinka ugu sareeya adduunka. shirkadda Our la shaqeynta shaqaale kala duwan. Laga soo bilaabo cusub oo qalin jabiyay ilaa maamuleyaal sarsare. Waxba nooma jiri karno sidaad diin u tahay. Ama waaya aragnimada aad ka muujisay khibradahaaga ku yaal Mumbai. Waxaan diyaar u nahay inaan meel u dhigno shaqo doone kasta.
Waxaanu la-talin shaqo ka heleynaa Mumbai
Waxaa jira shaqooyin badan oo banaan oo aan soo bandhigeynay. Gaar ahaan maamulayaasha tayada leh. Iyo sidoo kale IT-ga iyo maamulayaasha suuq geynta. Sababta oo ah ujeedkeennu waa inaan nolol cusub ka helno magaalada Mumbai. Naga kooxda oo iyaguna la shaqeeya dadka ajnebiga ah. Iyo inbadan oo ka mid ahi waxay sugi la 'yihiin, si ay ugu baxaan jihooyinka shaqada cusub. Annagoo taas maskaxda ku heynna, waxaan gelineynaa aaggooda raaxada. Xaqiiqdiina, taasi way caawin doontaa iyaga khibrad u leh guulaha shaqada cusub.
Ilaa iyo intaad saldhig ku leedahay Hindiya. Kooxdayada khabiirada, meel adiga doorar cusub. Heer cusub gudahood shaqooyinka ay bixiyaan. Kadib waxaad horay ugu sii socon doontaa adoo tagaya Mumbai horumarka shaqada. Markaa, kooxdeena HR waxay xaqiiqdi balan qaadayaan khibrad kororsi. Iyo shaqooyinku waxay bixiyaan waxyaabo aan waligood laga dhigin Mumbai.
Shaqooyinka ugu sareeya Mumbai waa inaad dalbataa!
Shaqaale Haye 1 Shaqada Mumbai
Maadaama ay tahay xisaabiye xisaabeed, waxaa jira dhowr waajibaad oo lagu maareeyo maalin kasta. Tusaale ahaan, waxay bixisaa macluumaadka dhaqaalaha. Maareynta faahfaahin faahfaahsan loona gudbiyo maamulka. Waxaa intaa dheer goortaas lagu sameyn doono qaab aad u faahfaahsan. Xisaabiyuhu waa inuu sameeyaa baaritaan ku saabsan warbixinnada. Kadibna falanqaynta xogta xisaabinta. Ugu dambayntiina warbixinnada diyaarinta oo u dir emayl ahaan. Shaqadan aad bay u adagtahay in la maareeyo. Sababtoo ah halkan iyo qof ayaa u baahan inuu diyaariyo hanti. Had iyo jeer hubso in mas'uuliyadda la soo uruuriyay. Intaas waxaa sii dheer, aruurinta iyo falanqaynta macluumaadka maaliyadeed. Isla mar ahaantaana. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso taas macaamil maaliyadeed iyo dukumiintiyadu had iyo jeer waa sax.
Iyo toddobaad kasta, iyo sidoo kale laba toddobaadle. The kooxda maaraynta wuxuu u baahan yahay inuu soo koobo heerka maaliyadeed ee hadda jira. Aakhirkii iyada oo aan dib loo dhigin aruurinta macluumaadka la diray. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, inta badan isla goobta ayaa diyaarineysa xaashi dheellitir ah. Iyo taasi waa qaybta ugu xun shaqooyinkaas. Maxaa yeelay weligood khalad ma noqon karaan. Kaliya sababtoo ah bayaanka faa'idada iyo khasaaraha. Waligood khalad ma noqon karaan. Waana hubaal in warbixino kale loo abuuray si isku mid ah.
No.2 Shaqooyinka xafiiska ee Mumbai
Shaqooyinka xafiiska dambe waa nooc kale oo shaqo ah. Marka, haddii aad raadineyso inaad qof la hadasho. Waxyaabaha ku saabsan shaqada noocan ah. Waa inaad la hadashaa khibrad badan oo maamula ganacsato ah. Tusaale ahaan maamulayaasha xafiiska hore. Sababta oo ah waxay awood u leeyihiin hayso dhowr talooyin ah. Midda ugu caansan ayaa ah howlaha shaqooyinka maamulka iyo sidoo kale xafiiska hore ee leh meesha laga soo galo xogta. Waxa kale oo jira meelo badan oo Freshers ah sida soo dhaweynta iyo isuduwidda daryeelka macaamiisha ee howlaha xafiiska dambe.
Shaqada xafiiska dambe ee magaalada Mumbai. Guud ahaan kahadalku wuxuu ka kooban yahay meelaha shirkadaha waaweyn. Dhanka taban, shaqada noocan ahi ma abuurto dakhli. Jidka shirkadda ayaa tan ku aragta shaqaalaha. Mowqifkani kama muuqan karo milkiilayaasha ganacsiga ama maareeyayaasha sarsare. Dhanka kale, siiyaan taageero aad u muhiim ah iyo maamul. Gaar ahaan maamullada xafiisyada sare. Shaqada xafiiska dambe ee Mumbai waxay lahaan kartaa dhowr doorar. Tusaale ahaan, qofku wuu awoodaa ka shaqeeyaan waaxyada sida tiknoolajiyada macluumaadka. hawlaha shirkadda. Sidoo kale HR, xisaabinta, iyo u hoggaansamida.
Shaqooyinka Bankiga Xawaaladda Xawaaladaha ee Mumbai
The shaqada Bangi ee Mumbai. Dhab ahaantii waxay noqon kartaa suurtogal u ah shaqaale cusub. Hoos kooxdeena ayaa dhajisay Bangiyada ugu sarreeya ee 10. Xaqiiq ahaan, waa inaad ku bilowdaa bangiga firfircoon. Dhanka kale, goobtaada shaqada waa inay sameysaa koox xamaasad leh oo la shaqeysa. Waxaana jira suurtogal weyn oo shaqo doonka Hindida ah. Sababtoo ah shirkadaha maaliyadeed ee Hindiya waxay shaqaaleysiinayaan Caalamiga. Marka, illaa iyo inta waxaad noqotay shaqaale. Bangiga ayaa suuragal ah inuu kuugu diro Dubai sidii masaafad. Ama xitaa Mareykanka Mareykanka iyo Canada. Dhanka kale, Shaqaalaha xirfadda leh ee Hindiya. Waxaa ka go'an inay ku dhammaystiraan himilada shaqooyinkooda. Iyo dabcan, bilow shaqo la Bangiyada Hindiya ee dunida oo dhan.
Falsafadda Ganacsiga Bangiga waxay ku salaysan tahay had iyo jeer qiimeyn xoog leh. Mid ka mid ah Tusaalayaasha waa mid heer sare ah. Waxaa intaa dheer, macaamiisha saxda ah waxay diiradda saaraan iibka iskutallaabta. Dhinaca togan, oo dadka tusinaya dhinacyada wax soo saarka ee bangiga. Waana hubaal waxa ugu muhiimsan ee xirfada bangi waa hoggaanka. Tusaale ahaan, maaraynta dadka hal abuurka iyo hawl maalmeedka iyo sidoo kale joogtaynta. Marka, shirkaddayada, sababtan awgeed, ayaa ah lagugu kalsoon yahay in lagaa caawiyo helitaanka kireysiga. Taasna maanka ku hayso, horumarinta aqoontaada. Intaa waxaa dheer, dhiirigelinta iyo ilaalinta dadka ugu fiican ee ku jira warshadaha bangiyada Hindiya. Fadlan eeg hoosta shaqooyinka bangiga ee Mumbai.
Shabakadaha Xawaaladaha ee Bangiga 10:
Bankiga Ganacsiga ee India
Hoos-u-shaqeynta Bangiga ee HDFC
Websaydhka Bangiga Qaranka ee Punjab
Websaytka "Career Bank"
Xirfadaha leh Bangiga Canara
Banka Baroda Shaqooyinka Fursadaha
Xisaabinta Bangiga Shaqaalaha
Shaqooyinka Bangiga IDBI
Bangiga Ganacsiga ee India
No.4 Shaqooyinka lagu galo xogta Mumbai
Shaqooyinka soo galista xogta, guud ahaan ku hadla, nooca kale ee xirfad shaqo ee Hindida. Shirkadeena, dhanka kale, wuxuu ku daray liistada noocan ah ee liiskayaga. Booska xog gelinta guud ahaan waxaa laga hadlayaa xubin ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda. Dabcan, waa shaqo caajis ah bilowga. Masuuliyada ugu weyni waa inay gasho ama cusbooneysiiso xogta nidaamka kumbuyuutarka. Kadib hubinta waa la cusbooneysiiyaa oo si sax ah ayaa loo meeleeyay. Guud ahaan, macluumaadka ay bixiyeen maamulayaasha. Xaaladaha badankood waxaa la galiyaa kumbuyuutar. Iyo 90% ka imanaya dukumiintiyada waraaqaha. Iyo sidoo kale emayllada iyo warbixinnada guddiyada. Marka, Tani waa fursada ugu fiican ee shaqaale xirfad hooseeya. Sidoo kale, shaqaalaha ku meel gaadhka ah ayaa awood u leh inay sameeyaan hawl maalmeedka.
Shaqaalaha shaqo doonka gaar ahaan mid ka mid ah bilowga xirfadda. Laga bilaabo booska aasaasiga ah ee shaqooyinka gelitaanka xogta. Iyo adoo adeegsanaya furaha ah ee noqon doona hawl maalmeedka. Dhinaca taban, waxaa jira iskaanka indhaha oo loo adeegsado in lagu meeleeyo xog duubista. Jagada lixdii bilood ee ugu horreeyay dadaal badan ayey qaadatay. Xaqiiqdiina ardayda cusub ee hada qalin jabisay waxay booskan u helayaan caajis. Marka, kooxdayadu waxay had iyo jeer kula talinayaan shaqooyin cusub Hindiya. Laakiin shaqadan waa in lagu daro kaliya ardayda hada qalin jabisay. Sababta oo ah dadka khibradda fiican leh waxay oran karaan way adag tahay in wax laga qabto. Masuuliyadduna maahan mid hooseysa. Sida wax walba waa in loo dejiyaa qaab dhismeed wanaagsan shirkadda.
No.5 Shaqooyinka Dawladda ee Mumbai
Lambarka shanaad, waxaan qabnaa shaqooyin Gov ah oo ku yaal Mumbai. Shaqada noocan ahi waa badiyaa waa hoggaamiyeyaal khibrad leh. Dhanka kale, raadinta wixii ugu dambeeyay Shaqooyinka Dawladda ee Mumbai. Waxay noqon kartaa howlo dhib badan. Dhanka togan, waxaa jira shaqooyin loogu talagalay fasalada 10th pass / 12th pass pass. Waxaa intaa dheer, Fursadaha shaqo waxay ku fiican yihiin fursad dheer. Sidaas darteed, khabiirka IT-Software ayaa looga baahan yahay qandaraasyada muddada dheer. Hindi Dawladda oo bixisa shaqooyinka bannaan ee mihnadeed iyo sidoo kale saraakiil diblomaasiyadeed. Sidaa awgeed, xaaladahaas, shaqaaleeyayaashu waxay dooran karaan fursado shaqo oo ku jira qaybaha Dawlada.
Boggeena internetka ayaa sidoo kale qora boggaga shaqooyinka Govt. Anigoo taas maskaxda ku hayna, waxaan rajeyneynaa inaan mid yeelanno hanuuniyo loogu talagalay dhammaan dadka shaqo doonka ah ee ka socda magaalada Mumbai. Guud ahaan, Had iyo jeer, kooxdeena aruurinta agabyada musharixiinta. Waxaa intaa sii dheer, adeegsadayaashayada shaqo raadinta noocan ah maalin kasta raadinaya. Ilaa iyo inta dadka isticmaalaya goobta shaqada. Dhab ahaantii u hel il qiimo leh macluumaad ku saabsan shaqooyinka Dowladda ee Mumbai. Xaqiiq ahaan, waxaan sidoo kale raadineynaa inaan helno shaqo dooneyaasha. Loogu talagalay furitaanka cusub ee waaxda dowladda Maharashtra. Waxaa jira suurto gal weyn. Shaqooyinka Dowladda Dhexe, tusaale ahaan, UPSC iyo SSC waxay ku korayaan safka hore. Cusub fursadaha ayaa sii kordhaya maalin walba. Iyo asalka taariikhda dawlad-goboleedyada Dawladeed ee KPSC iyo MPPSC. Labadaba ma yihiin diyaar u ah in ay shaqaaleysiiyaan musharaxiin cusub oo Hindiya ah.
Miyaa ay yihiin shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka bannaan?
Hagaag haddii aan qaadanno dalabyada shaqooyinka caadiga ah. Shaqada dawladda ayaa mudan in la helo meel kasta. Goobtayada shaqada waa sida ugu wanaagsan ee loogu adeegsado shaqaaleysiinta. Gaar ahaan joogsiga caqliga leh ee shaqooyinka ugu dambeeya ee shaqaaleynta dowladda. Kooxdayadu waxay ka gudubtaa warshadaha iyo waaxaha kala duwan ee Hindiya gudaheeda. Marka, ka hel shaqooyinka ugu mushaharka badan dawladda ee Mumbai. Ka shaqeynta urur dawladeed sida xaqiiqada ah, waxaa mudan in la maareeyo. Tan iyo shaqada cusub, waa la bilaabayaa. Gudaha mid kamid ah hayadaha dowlada. Xaaladdaada shaqsiyeed ayaa bilaabatay kor u kaca iyo heerka sharaf ayaa kori doona.
Waxaa jira dhowr fursadood oo shaqo oo dowladda Mumbai ah oo musharixiinta u taagan. Guud ahaan hadalka, taariikh nololeed kala duwan ayaa dadka ka caawin karta inay shaqo helaan. Xitaa ka shaqeynta ciidamada India ama shirkadaha qandaraaslaha waxay horseedi karaan dalabyada noocan ah ee shaqo. Dhinaca wanaagsan mar labaad, ahmiyada ugu weyn ee shaqooyinka dawladda waa kuwo aad u weyn. Tusaale ahaan, qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka waxay soo bandhigaan in lagu daro mushahar sare. Had iyo jeer waqtiga, iyada oo aan dib u dhicin waqti kasta. Tababarka bilaashka ah iyo dejinta inta lagu gudajiro aqoon-isweydaarsiga iyo tababarka. Dhinaca taban, dabacsanaan yaraanta xagga shaqada. Laakiin qaybta ugu weyni waa a Nabadgelyada shaqo ee ugu fiican iyo tasiilaadka ka dib hawlgabka. Iyo xaqiiqda ah hawlgabka wanaagsan ka dib waqti cayiman. Xaaladaha intooda badan, waa sannado 25 ilaa hawlgab.
Ku qor noocyada shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka bannaan si aad u hesho?
Isku soo wada duuboo, inta badan shaqooyinka Dowlada ee kuyaala Magaalada Mumbai si wanaagsan ayey u bixinayaan. Inta badan shaqooyinka banaan waxay bixiyaan waxbadan oo la mid ah shaqooyinka gaarka loo leeyahay. Marka la eego qodobbadaas, helitaanka deeqaha dawladda ee ugu sarreeya. Waxay u muuqataa wax adag laakiin aan macquul aheyn gaar ahaan Mumbai. Tusaale ahaan, waxaan hoos dhigney dhowr shaqooyin dowladeed.
Ka shaqeynta sidii maamulayaasha adeegyada madaniga ah
Guddiga Adeegga Dadweynaha ee Gobolka
Shaqaalaha Hawada Kiimikada Hindiya
Fulinta sida Bacriminta Ltd
Jaamacadda Mumbai oo ah professor
Macallinka Dawlada ama Aqoonyahanka Govt
Adeegyada Difaaca sida Ciidanka Ciidanka, Badda iyo ilaaliyaha xeebta
Shaqaalaha manhajka Hindida
Khabiirka caymiska baananka
Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha Isbitaalka Hindida
Si kastaba ha noqotee, xirmo shaqo oo mushahar fiican lagu siiyay maahan dhacdo. Newbies waxay u baahan yihiin inay gacantooda qabsadaan oo ay kasbadaan mushaharka. Guud ahaan marka laga hadlayo, si loo kasbado heerka bulshada wanaagsan ee ka dhexeeya dadka aqoonta sare leh ee Hindida. Qofka cusub waa inuu si guul leh u dhammaystiro koorsooyin dhowr ah iyo tababar. Xaqiiq ahaan, qaar badan oo ka mid ah ayaa aad uga adag intaad filan karto. Gaar ahaan marka laga hadlayo lacs waayo-aragnimo bilow ah. Waxay u horseedi kartaa shaqaalaha cusub inay galaan imtixaanka gelitaanka sanad walba. In uu noqdo shaqaale dawladeed oo guuleysta oo ku sugan magaalada Mumbai. Qofku waa inuu bilow u diyaarinta shaqooyinka banaan ee noocan ah dhowr sano ka hor.
No. 6 HR Shaqo ee Mumbai
Sida ku takhasusay kheyraadka aadanaha. Shirkad kasta, waxaad helaysaa boos fara badan oo aad hore ugu socon karto. Waxaa intaa dheer, Booskani wuxuu leeyahay dhaqan u gaar ah. Sababtoo ah waxay la shaqeysaa bini'aadamka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, inaad weji ka weji wejiga wejiyada uhesho sida fikrad caqli gal ah. Sababta oo ah waxaad ka koobnaan kartaa qiyamka qofka la wareystay. Sidoo kale hubinta in himilooyinku la barbar dhigo himilooyin iyo caadooyin. Gaar ahaan ee maareynta maamulka ee shirkadda. Ka hor intaan warqadda shaqada la bixin. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo luqadda shaqada ee shaqaalaha mustaqbalka. Sababtoo ah waa inay raacdaa tilmaamaha ganacsiga.
Dhinaca wanaagsan, shirkadaha qaarkood waxay leeyihiin nidaam iyo caadooyin. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, koox dad ah oo isla fikradda wada shaqeeya ayaa wada shaqeyn kara. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan inta aad ka shaqeyneyso jagadan. Xaqiiqdii waa Horumarinta shaqaale wanaagsan oo shaqaalaha ah. Markasta, maamulayaasha cusub waxay kobciyaan oo maamulaan dhaqanka shirkada oo dhan. HR-da madaxda sare ee Mumbai waxay shaqaalaysiisay shaqaale cusub oo Hindiya ah. Iyo sidoo kale inaad sii wadatid dheefaha iyo mushaharka kiisaska qaarkood.
Dhanka kale, dhex dhexaadinta khilaafka dhexdood oo ka qayb gal tababbarka iyo horumarka. Noqo hawl aan sahlanayn oo lagu maareeyo gaar ahaan Hindiya. Laakiin Doorka kheyraadka dadku waa udub dhexaadka guusha shirkada. Iyo wax alla wixii ay ku dhici doonaan. Qofka mas'uul ka ah shaqaaleysiinta dadka cusub ee shirkadda. Dhab ahaantii, waxay leeyihiin saameyn xoogan oo ah shirkadda mustaqbalka iyo horumarka.
Waa maxay muhiimadda masuuliyadaha Khabiirada kheyraadka dadka
Kheyraadka aadanaha / HR qofka / haysta takhasusleyaal ama jagooyin maareyn. Iyo dabcan, hawlaha ugu masuuliyaaran waa shaqaalaynta iyo si toos ah baaritaanka CV. Had iyo jeer hubso in baaritaanka asalka la sameeyay. Kadib wareysiga iyo soo-galinta shaqaalaha suurtagalka ah. Dhanka kale, haddii shirkadaha shaqaaleysiiya shirkadaha. HR-ga ayaa mar walba bixinaya jawaab celin dheeri ah. Intaa waxaa dheer, mar walba hubi in maamulayaasha mustaqbalka ay raaci doonaan tababarka. Khubarada HR/ qofka masuulka ka ah. Dhab ahaantii, waxay u muuqdaan in ay diirada saaraan hal meel oo horumar ah.
Tusaale, qorida iyo tababarka. Guud ahaan, waa shuruudaha ugu yar ee wax laga qabto. Gaar ahaan magaalo weyn sida Mumbai. Waxaa jiri doona aagag dhowr ah iyo Hawlaha ay tahay in la qabto Sida ugu dhaqsaha badan. Shirkadaha yaryar ee magaalada Mumbai. Caadi ahaan waxay yeelan doonaan hal ama labo Maamulaha HR ama shaqaalaha. Dhanka kale, shirkadaha waaweyn ee leh kuwa fuliya howlo badan oo HR. Adigoo isku dayaya inaan kuqabno meelaha iyo adeegyada gaarka ah. Marka, run ahaantii, adiga ayay kugu jirtaa hadaad jeceshahay inaad isku dubaridid ​​howlaha maamulka ee hay'ad. Adiga laftaada ahaan agaasime sare. Ama maaraynta shirkad weyn iyadoo xoogaa caawimaad ah.
No.7 Shaqada qaybta IT ee Mumbai
Shaqooyinka IT-ga ee Mumbai. Sidaa daraadeed, aan ka bilowno bannaan baxyada taageerada IT-ga. Tan iyo markii waxaad ka bilaabataa shaqo noocan ah ee India. Waxaad qayb ka noqon doontaa qaab dhismeedka teknolojiyada Macluumaadka ee mashiinka shirkadaha waaweyn. Dhanka kale, waxaa India ka jira fursado aad u balaaran oo loogu talagalay khabiirka kumbuyuutarka. Xaqiiqdii, shirkadaha ugu sareeya ee ku saleysan Hindiya. Waxaad raadineysaa qof ku takhasusay IT-ga bil kasta, maalin kasta iyo usbuuc kasta. Marka, haddii aad ka shaqeysay shaqooyinka banaan ee taageerada farsamada. Shaqaalaynta shaqooyinka IT-ga ee Mumbai waa inay adiga kuu shaqaysaa.
Waxaa jira fursado badan. Laga bilaabo shaqo cusub oo cusub ama sida loo shaqeeyaha caawinta. Marka ugu horreysa waa inuu noqdaa boos shaqo oo wanaagsan. Dhinaca kale, haddii aad haysato khibrad kugu filan. Waxaad ka bilaabi kartaa qaybo kala duwan. Tusaale ahaan, ilaalinta iyo ilaalinta nidaamka kombiyuutarka. Mid ka mid ah tusaalayaashu waa nidaam Linux ah iyo sidoo kale abuuritaanka shabakad iyo server. Intaa waxaa dheer, hubinta in shabakadaha si fiican u shaqaynaya. Gaar ahaan dhexdeeda xafiiska xafiisyada ururka.
Qeybaha ugu mashquul badan waa khadka hore. Sababtoo ah mar walba IT-ga u baahan yahay inuu si toos ah ula dhaqmo macaamiisha cusub ama jira. Dhab ahaantii, badanaa iyaga ah, ma lahaan doonaan aqoon ku filan oo ku saabsan dhibaatada. Dhab ahaantii, waxay yeelan doonaan arrimaha farsamada. Inta badan qaladaadka caanka ah waxaa la ilaawaa furayaasha, faylasha soo gudbinta ama email ahaan. Waxaa laga yaabaa inaanay noqon shaqooyinka ugu mushaarka badan. Gaar ahaan bilowga. Laakiin muddo-dheer, dhowr sano gudahood. Ku habboon IT Tababaraha kooxda magaalada Mumbai waxay sameyn doontaa lacag wanaagsan.
Maxaa kale oo aad samayn kartaa si aad shaqo uga hesho Mumbai?
Meelaha shaqada ee Mumbai
Qaybtaan, shaqaaleeyaha waxay xaqiiqdii ka heli karaan macluumaad xiiso leh. Mid ka mid ah waa boggaga internetka ee ugu wanaagsan. Halka ay shaqo-dooneyaasha ka helaan shaqo-bixiyeyaal suurtagal ah. Diiwaangali faahfaahintooda macluumaadka cusboonaysiinta. Iyo gadaasha, dadka shaqo doonka ah waa in ay diiwaan geliyaan xogtooda muujinta digniinta shaqada. Xitaa casumaado yaryar oo casumaad ah oo loogu talagalay ku biiritaanka ayaa caawin kara. Sababtoo ah qofna ma garanayo goorta shaqo la heli karo la heli karo.
No.1 NaukriGulf shaqooyinka Mumbai
NaukriGulf ee Hindiya. Mid ka mid ah goobaha shaqo ee ugu fiican India. Waqtigan xaadirka ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaqaaleeyaha degmada. Iyo sidoo kale qurbajoogta caalamiga ah ee leh khibrad suuqgeyn. Inta badan dadka doonaya inay ku biiraan. Wixii hubaal ah waxay heli doontaa shaqooyinka xiisaha leh ee Mumbai. Waqtigan xaadirka ah, shirkadu waxay bixisaa qaybo kala duwan. Intaa waxaa dheer, liiska shirkadaha ugu sareeya ee ka shaqeeya Mumbai.
No.2 Olx xirfad ku leh Mumbai
kale bogga loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah. Waa OLX India. Iyadoo Olx Mumbai iyo sidoo kale Olx Delhi. Iyo dhinaca kale, xataa Olx Pune waa in kaa caawiya inaad shaqo hesho. Sidaa daraadeed, arrintan maskaxda ku haysa, dadka cusubi waxay u baahan yihiin in lagu wargeliyo. Sababtoo ah waa goob degaan oo bilaash ah oo loogu talagalay qof walba. Intaa waxaa dheer, in badan oo shirkado ah oo shaqo u soo diraya waxay la wadaagaan India oo dhan. Dhanka kale, dadku waxay bilaabaan iibsashada iyo iibinta. Waxyaabaha shakhsiga ah ee ugu fudud. Laakiin shirkad maalinle ah waxay leedahay shaqo cusub.
Degdeg ayey u tahay Hindida. Iyadoo taas tan maskaxda lagu hayo ayaa sidoo kale dadka shaqo doonka ah. Dhajinta qoraalkooda Waxaan sugayaa inaan shaqo ka helo Mumbai. Laga soo bilaabo teleefoonnada, soo-dhawaynta iyo IT-ga la suuqgeynta. Dhammaan shaqooyinka la helo waa jiraan. Shaqooyinka cusubna waxay ka socdaan magaalooyin kala duwan. Dhamaan Hindiya iyo hareeraheeda oo leh shahaadooyinka MBA.
No.4 Hubaal dhab ah guddiga shaqada
Xaqiiqdii, sida xaqiiqda ah, ayaa sidoo kale shaqaaleysiinaysa Mumbai. Oo waa mid ka mid ah shaqo raadinta ugu fiican matoorrada adduunka. Marka, haddii aad raadineyso xirfada Mumbai. Dhab ahaantii, hoos ka daawo muuqaalka. Guud ahaan hadalka, waa mid ka mid ah goobaha shaqada ee ugu fiican iyo hagista loogu talagalay Baakistaan iyo Hindiya. Marka, dhab ahaantii, Mumbai waa la daboolay.
No.5 Shaqada JobIndia
Shaqada Hindiya, sida xaqiiqda ah, ka shaqeeya shirkadda India ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican. Job seekers waa awoodaan si aad u hesho shaqooyin xiiso leh. Sidoo kale horey loogu sii wado, waxaa jira talooyin wareysi oo badan. Waxaa sidoo kale jira qaybo shaqo oo xiiso badan leh. Sidoo kale nidaamka meesha ku yaal. Sidaas darteed, waxaan nahay runtii La talinta shaqo doonka si ay u sii socoto shirkadan. Oo dib u soo noqoshada shaqooyinka cusub ee la cusbooneysiiyo.
No. 6 Guddiga shaqada ee Monster
Monster India mid ka mid ah caanka caanka ah. Guddiga shaqooyinka ugu da'da weyn. Tani waa goob shaqo oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah. Monster.com bixiyaan xirfad shaqo iyo shaqaale qorista. Xaqiiqdii waxay bixisaa astaan ​​muhiima oo laxiriira maamulayaasha iyo shaqaaleynta agaasimayaasha. Waxaan aaminsanahay inay hayaan shaqooyin ku habboon. Tusaale ahaan Mumbai iyo Delhi oo leh Bangalore iyo Doha. Waxaa intaa dheer, waxay shaqaaleysiinayaan Chennai, Pune, iyo Kolkata.
No.7 Mumbai Shaqooyinka leh Wareeg
Glassdoor dhab ahaantii waxay ka mid tahay shirkadaha ugu sareeya 10. Sida xaqiiqda ah, waxaad ka raadin kartaa shaqooyinka Mumbai. Guud ahaan, Getting shaqada ku haboon Mumbai. Ma aha in ay dhibaato ku tahay shirkadan. Sababtoo ah shirkad foolxun ah ilaa wakhtigan xaadirka ah, hagaya qiimeynta iyo mushaharka. Dalabyo cusub oo shaqo ayaa la furaa magaalooyinka sida Mumbai. Sidaa darteed, isku day inaad la shaqeyso sidoo kale.
No. 8 Iyadoo Shine.com waxaa ka jira 18K Shaqooyin
Waxaa jira 18,000 shaqooyin firfircoon Mumbai. Shirkadda iyo kuwa tooska u shaqeeya ee goobta shaqada. Dhab ahaan shaqooyin badan oo banaan Mumbai. Sidaas awgeed, waa inaad hubisaa shaqooyinka ugu dambeeyay. Intaa waxaa dheer, inaad faahfaahintaada ku qorto qaybo kala duwan. Sababtoo ah shaqooyin badan oo ku yaal Mumbai. Shirkadan ayaa ku siin karta shaqooyin badan oo qiimeeynaya shaqooyinka banaan ee garoonka diyaaradaha. Intaa waxaa dheer, shirkadan oo bixisa bilaash loogu talagalay dadka shaqo doonka ah.
No. 9 Shaqooyinka Mumbai oo leh Freshers World
Waxaa sidoo kale jira shaqooyinka loo fidiyo kuwa cusub Mumbai. Iyo dadka cusub ee qalin jabiyay waxay xaqiiqdii ka heli karaan xiisaha shaqo ee shirkadan. Sidaa daraadeed, arrintan maskaxda ku hayso, isku day inaad aragto. Sidoo kale adoo u dira CV si frehsworld.com. Wax badan ayaa jira goobaha shaqo doonka ee goobtan shaqo.
No.10 Shaqooyinka Mumbai oo leh Randstad
Shirkadda Randstad waxay xaqiiqdii kaa caawin kartaa helitaanka a Shaqada Mumbai. Sababtoo ah waxaa jira shirkado kale oo shirkado ah. Shirkaddaan, waxaad ka heli kartaa shaqooyin badan oo aad u baahan tahay. Tusaale ahaan maareynta mashruuca iyo dhaqaalaha. Dhanka kale, saliidda iyo gaaska ee injineernimada. Sidaas darteed, waa runtii u qalantaa inaad aragto oo u dirto resumey cusub.
Ma xiiseyneyso xirfad ku taal Mumbai?
Shaqo ka bilowda Dubai
Waa maxay farqi u dhexeeya Dubai iyo Mumbai?
Magaalada Mumbai waa Magaalo-weynta Hindiya. Dhanka kale, Dubai waa dhaqan carabi ah Icon. Tanna waxay ka dhigeysaa in labadan magaalo ay isaga fogaadaan naftooda. Dhanka kale Mumbai, waxay leedahay shirkado caalami ah oo wanaagsan. Tusaale ahaan, shirkado fara badan oo ka socda Mareykanka ayaa xafiisyadooda dhigay magaalada Mumbai. Laakiin Dubay, waxaa jira fursado aad u weyn shirkadaha Carabiga.
Sidaas awgeed, haddii aynnu ku salaysanno arrintaasi. Waxaa jira farqi weyn. Iyada oo ku saleysan labadan magaalo. Wixii Tusaale ahaan Dubai City. Si aad ah ayaa loogu haggaa loogu talagalay. Iyo sidoo kale booqdayaasha cusub. Marka, dadka ka yimid India ayaa ah adigoo eegaya inaad u guurto UAE. Dhanka togan, inbadan ayaa la dhigi doonaa. Laakiin qaarkood waxay ku noqdeen Mumbai. Qiimaha ku nool magaalada Dubai aad ayey uga badan tahay haddaan isbarbar dhigno Mumbai. Waxaa sii dheer dejinta iyo qiimaha degitaanka. Aad ayey u sarreeyaan UAE. Gaar ahaan bilowga nolosha cusub.
Mumbai waa magaalada ugu wayn ee kobcinta dhaqaalaha India. Dhinaca kale, meeshani waxay leedahay dad kale oo dakhliga ku salaysan. Sidoo kale Mumbai, waxaa jira meelo dhaqameed oo firfircoon. Dhinaca kale, Sanadihii la soo dhaafay ee 20. Magaaladda Mumbai waxay ku badashay xarun ganacsi oo weyn oo caalami ah. Shirkado badan oo caalami ah ayaa halkaas u dhaqaaqaya. Sababtoo ah meeshan ayaa loogu talagalay ganacsi. Iyada oo ay jiraan shirkado caalami ah oo caalami ah iyo warshado soo kordhayay, oo ku jabaya caalamka adduunka ganacsiga iyo horseed u noqoshada caan ku ah kharashyada.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqo ee Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.
1 Faallada faalaha